MYANMARTHWAY BLOG: March 2011
Gtalk အတွေးစာသားများ စုစည်းမှု (၁၉)
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ပိုက်ဆံတွေအချင်းချင်း ကြိုက်ကြ၊ ချစ်သူတွေဖြစ်ကြ၊ မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး ပိုက်ဆံလေးတွေ ထပ်မွေးပြီးတိုးပွားလာရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲနော်။ :D
မိုးမိုးက ပြောတယ်.... ငါမှားလား... မင်းမှန်လား... တဲ့။
လင်းလင်းက ပြောတယ်.... ငါ့ဘက်ကမှားတာပါ... တဲ့။
ဂျီလတ်ကလည်း ပြောသေး... နှစ်ယောက်စလုံး မှားခဲ့တယ်... တဲ့။
အောင်လကတော့.... ငါ့ဘက်က မှားတာပါ... တဲ့။
ကဲ... ငါကရော... ဘာပြောရမလဲ???
မြန်မာနိုင်ငံမှ အိုင်တီပညာရှင်အကျော်အမော် ဒေါက်တာ မတောက်တခေါက်က မြန်မာများအတွက် ဂျီတော့ခ်နှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် နှစ်မျိုးတည်းသာ အသုံးပြုနိုင်သည့် အင်တာနက်စနစ်တစ်မျိုးကို တီထွင်ဖန်တီးရေးဆွဲထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ထို့အပြင် နာမည်ကြီး မြန်မာအင်တာနက် WebPageများဖြစ်သည့် Access Denied, Network Error, Connection time out စသည့် ၀က်ဘ်ပေ့ခ်ျများတွင် ကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကြက်ဖသေသွားတယ်ဆိုလို့ သွားကြည့်တာ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး။ သနားစရာလေး။ လည်ပင်းလေးဆန့်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး အမွှေးတစ်ပင်မှမကျန်အောင် အနှုတ်ခံထားရသေးတယ်။ ကြက်သားသည်ဆီမှာ ပြောပါတယ်။
အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာတဲ့။ ခက်တာက အဲဒီရွာကြီးကို သွားကြည့်မယ်လုပ်တိုင်း ငါတို့ကွန်နက်ရှင်းကြောင့် ရွာပေါက်ကနေ ခဏခဏ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်။
မြန်မာဆန်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို မနေ့က တွေ့လိုက်တယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်က ပါးစပ်ဖျားမှာ ရောက်လာတယ်။ ခပ်တိုးတိုးညည်းမိတယ်။ ခင်မောင်တိုးရဲ့ ရိုးရိုးလေးသာ ၀တ်ခဲ့ပါကွယ်... အေးမြလို့။
ဟော... သနပ်ခါးလေးတွေနဲ့ ကပိုကရိုလှနေတဲ့ ကောင်မလေးကို တွေ့မိတော့လည်း အာဇာနည်ရဲ့ အမြဲလိုပင်... သနပ်ခါးလေး ပါးပါးညီညီလိမ်းကျံကာ... ကို ဆိုလိုက်မိတယ်။
မနေ့က မင်းကို အွန်လိုင်းမှာ တွေ့လိုက်တော့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ညည်းမိပြန်ရော...။ Who let the dog out? :P
ဖတ်မိသမျှ ဂျီတော့ခ်အတွေးစာသားလေးတွေထဲက သဘောကျမိတာလေးတွေကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အချို့စာသားလေးတွေကို အသုံးအနှုန်းနဲ့ စာလုံးပေါင်းလေးတွေ ပြောင်းထားတာကိုတော့ နားလည်ပေးကြမယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဟု....။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်၊ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:06 PM0Comment(s) Link This
နေ့စဉ်ထုတ် မြ၀တီရောင်စုံသတင်းစာကို မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှစပြီး ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာများရဲ့ ရှေ့ပြေးလို့ ယူဆပါတယ်။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ အောင်မြင်ပါစေ မြ၀တီသတင်းစာ။
မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတသစ် ကျမ်းကျိန်မယ်လို့ သတင်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ နိုင်ငံရေးကို စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ ဆိုကြသူတွေ ဖြစ်ပါစေ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသစ် ကျမ်းကျိန်မှာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ဥပဒေပြုရေးအာဏာအနေနဲ့ ပီပီပြင်ပြင် ရုပ်လုံးပေါ်စ ပြုလာပြီဖြစ်ပေမယ့် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့အတွက် စိတ်ဝင်စားနေကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သမ္မတသစ် ကျမ်းကျိန်ပြီးတဲ့အခါ အခုလက်ရှိ နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို ယူထားကြသူတွေက အစိုးရသစ်ကို အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွေ လွှဲပြောင်းပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ နိုင်ငံတော်သမ္မတသစ်၊ ဒုတိယသမ္မတသစ်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့သစ်တို့နှင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ခရီးလမ်းဟာ စိတ်ဝင်စားစရာအတိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကခက်မသုံးဖြာဖြစ်တဲ့ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာအရပ်ရပ်ကို ပါဝင်ပုံဖော်နေကြသူများအားလုံး နိုင်ငံတော်အကျိုး၊ ပြည်သူလူထုအကျိုးကို အစဉ်ရှေ့ရှုပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ ချီတက်ကြရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအားလုံးကလည်း ကျရာနေရာမှ ပါဝင်ထမ်းရွက်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရကြောင်းပါခင်ဗျား။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမေးမြန်းတဲ့ လက်ရှိအချိန်အထိ လက်နက်စွဲကိုင်ပြီး ဥပဒေပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူများအရေး၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက ပြန်လည်ဖြေရှင်းတင်ပြခဲ့တာကို သတင်းမှာ နားထောင်ခဲ့ရပါတယ်။ အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို အင်မတန်မှလည်း တွေးစရာကောင်းတဲ့ အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက,ကတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းအမည်ခံပြီး လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူတွေရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေ အဓိကကျင်လည်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဒေသတွေဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံရဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ အားပေးကူညီမှုတွေကြောင့် (အိမ်နီးချင်းကောင်း မပီသမှုကြောင့်) ယနေ့အထိ ရပ်တည်နေနိုင်သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးက ဖြေရှင်းရာမှာ တစ်ချိန်အခါ ဗကပတွေ ခေါင်းထောင်ခဲ့စဉ်က ယခုသောင်းကျန်သူတွေထက် ပိုမိုအင်အားကြီး ဆိုးဝါးခဲ့ပေမယ့် အိမ်နီးချင်း (တရုတ်) နိုင်ငံရဲ့ မိတ်ဆွေစစ်ပီသမှုကြောင့် ဗကပတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပုံကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေက ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှ ပြန်ရေးပြတာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဦးကျော်ဆန်းရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကို ရှာဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကြားသိရတဲ့ သတင်းတွေအရ ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ မေးခွန်းကို ဦးကျော်ဆန်းက ဖြေကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာ လွှတ်တော်တက်ရောက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးက သဘောကျ ကျေနပ်ခဲ့ကြရတဲ့ အဖြေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတိုးတက်မှုကို အနှောင့်အယှက်တစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုတွေ အမြန်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းများ ပွင့်လန်းဝေစည်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းနေရကြောင်းပါ။
ဂျပန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ အက်ဆစ်မိုးတွေ ရွာမလိုလို ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ အခုတော့ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟာ ထစ်ခနဲရှိရင် သူများပြောသမျှ ယုံတတ်ကြတဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီးကို ဖျောက်သင့်နေကြပါပြီ။ ဘာမှန်းမသိ၊ ညာမှန်းမသိဘဲ ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို ၀င်လာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျမှန်သမျှကို ဖော်ဝက်(ဒ်)လုပ်နေကြတာတွေ စဉ်းစားသင့်ကြပါပြီ။ ကောလာဟလတစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးဝါးသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုသင့်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ခေါင်းနဲ့ကိုယ် ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲ သူများကပြောတိုင်း ယုံတတ်ကြတာ တုံးလွန်းရာကျပါတယ်။ အရာတိုင်းမှာ ကိုယ်က မသိနိုင်၊ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ ဒါဆိုရင်လည်း တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပြောတဲ့အထိတော့ စောင့်သင့်ကြပါတယ်။ ဘယ်သူရေးမှန်းလည်းမသိ၊ ဘယ်သူပြောမှန်းလည်းမသိတဲ့ ဟုတ်နိုးနိုးသတင်းတွေကြောင့် တည်ငြိမ်မှုတွေ ပျက်ပြားသွားရရင် မကောင်းပါဘူး။ ဒီအက်ဆစ်မိုးကိစ္စတစ်ခုတည်းကို ပြောနေတာမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်လာလတ္တံ့သော ကိစ္စများကို ကြိုတင်ရင်မောစွာဖြင့် ပြောမိခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။
ညနေ ၆ နာရီ ၂၃ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 6:22 PM0Comment(s) Link This
ပြုံးပါ၊ ရယ်ပါ အသက်ရှည်မှာ
[ရယ်ရယ်ပြုံးပြုံး ဟာသများ စာအုပ်မှ]
Posted by Ko Nyan Posted Time 5:44 PM0Comment(s) Link This
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လူတိုင်းကြားဖူးတယ်။ လူတိုင်းနီးနီးလည်း ပြောဖူးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နားလည်တဲ့လူ၊ လိုက်နာတဲ့လူ အင်မတန်ရှားတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချပြီး အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူဟာ လက်ချိုးရေလို့ရအောင် နည်းပါးတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါကို နားမလည်ဘဲ ကိုယ်လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဟာ ကိုယ့်အတွက်တင် မဟုတ်ဘဲ အခြားသူတွေအတွက်ပါ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် အဲဒီအလုပ်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖြစ် စဉ်းစားစရာပဲလို့ မြင်မိပါတယ်။
အဆိုအမိန့်တစ်ခုကို ဖတ်ဖူး၊ ကြားပါတယ်။ ``သိတဲ့အရာတွေ များသလောက် နားလည်တာကျတော့ နည်းလိုက်တာ´´ တဲ့။ သာမန်တွေးရင် ရယ်စရာဖြစ်ပေမယ့် တွေးဆဆင်ခြင်စရာပါ။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေမှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အချက်အလက်တွေနဲ့ နပန်းလုံးကြရပါတယ်။ ဟိုဟာလည်း သိချင်ရတာပဲ၊ ဒီဟာလည်း သိချင်လိုက်တာပဲ။ အဲဒီလို သိချင်တာတွေ အားလုံးကို ဗဟုသုတဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထည့်တတ်ကြပါတယ်။ ဗဟုသုတတွေ များမြောင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဗဟုသုတတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာ မသိတာကတော့ ဆိုးဝါးပါပေ့။ ဟိုဟာသိလည်း သူများကို ပြောလိုက်တာပဲ၊ ဒီဟာသိလည်း သူများကို ပြောလိုက်တာပဲ။ ကိုယ်တိုင် အဲဒီအရာကို သေသေချာချာ နားလည်သလားဆိုတော့ ဘာမှကို နားမလည်တာပါ။ အဲဒါကြောင့် တစ်လက်စတည်း နောက်ထပ် အဆိုအမိန့်တစ်ခုကို သတိရလိုက်မိပါရဲ့။ ``ခေါင်းထဲမှာ ဗဟုသုတတွေ များလွန်းတော့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအတွက်တောင် နေရာမရှိဘူး´´ တဲ့။ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
အေးချမ်းမှုကို လိုချင်ကြတယ်လို့ လူတိုင်းပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအေးချမ်းမှုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကလေးမှာပဲ တည်နေတယ်ဆိုတာကို နားလည်သူ နည်းပါတယ်။ သူများတွေအစား စိတ်ပူပန်နေမယ့်အစား ကိုယ့်စိတ်လေးကိုယ် အေးချမ်းအောင် အရင်ဆုံး နေကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်လေး အေးချမ်းတဲ့အခါ အခြားအရာတွေဟာလည်း အေးချမ်းလာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်က စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို မရရှိ၊ မခံစားရပါဘဲ သူများတွေအတွက် ပူပန်နေရတာနဲ့တင်ကို အေးချမ်းမှုက ပျောက်ဆုံးလှပါပြီ။ လူတိုင်း အေးချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
စိတ်ညစ်ရင် ဘာလုပ်သလဲလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို မေးကြည့်မိပါတယ်။ အဖြေအမျိုးမျိုး ရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ တချို့က သီချင်းအော်ဆိုတယ်၊ တချို့က ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်တဲ့။ တချို့ကျတော့ အိပ်လိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တချို့တချို့တွေကတော့ တရားစာအုပ်တစ်အုပ် ဖတ်လိုက်တယ်တဲ့။ အဖြေအမျိုးမျိုးပါပဲ။ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် တစ်ခု သတိထားမိတာက အားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့အဖြေကတော့ သူတို့ စိတ်ညစ်တဲ့အခါ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကနေ ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကင်းကွာအောင် နေခြင်းပါပဲ။ ဒါဆိုရင် အပြောင်းအလဲဆိုတာဟာ လူတွေအတွက် စိတ်ညစ်ပြေဆေးများလားလို့ မ၀ံ့မရဲ တွေးနေမိကြောင်းပါ။
မြန်မာ့သွေးမိတ်ဆွေများအားလုံး နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဟု.....။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။
ညနေ ၅ နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 5:49 PM0Comment(s) Link This
တွေးတောရယ်မောဖွယ် စာပေဆိုင်ရာ အဆိုအမိန့်များ
အပျော်ဖတ်စာပေကို ပြည့်တန်ဆာလိုပဲ သဘောထားကြတယ်။ ရှုတ်ချကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မကင်းနိုင်ကြဘူး။
၁၈၇၃ - ၁၉၄၄
ထုတ်ဝေသူဟာ အကျိုးအမြတ်ရှိမလား ဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားတယ်။ ခင်ဗျားရေးတာ ကောင်းတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားဟာ ယောက်ျားလား၊ မိန်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဆင်လားဆိုတာ သူ လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားဘူး။
သရော်စာဆိုတာ အနားမှာ ဘာမှမရှိရင် အထိရောက်ဆုံး လက်နက်ပါပဲ။
အံ့မခန်း တိုးတက်လာလိုက်တာ။ စာမတတ်တဲ့လူတောင် အယ်ဒီတာ ဖြစ်လာနေကြပါလား။
ဝေဖန်ရေးသမားဆိုတာ ကိုယ်ထမင်းစားရဖို့အတွက် တခြားလူ ထမင်းစားချက်စိတ်ပျောက်အောင် လုပ်တဲ့လူ။
မောင်ကောင်းထိုက် (နှီးပဒေါ) ရဲ့ ထွေလီကာလီ ထဲကပါ။ ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by Ko Nyan Posted Time 4:50 PM0Comment(s) Link This
ယောက်ျားများအတွက် ကျန်းမာရေးစံနှုန်း (၁၀) ချက်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယောက်ျားများအတွက် ကျန်းမာရေးစံနှုန်း (၁၀) ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အားမာန်ပြည့်ဖြိုးနေရမယ်။ ဆိုလိုတာက နေ့စဉ် လုပ်ငန်းများပြား တာဝန်ကြီးလေးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုများနဲ့ နေ့စဉ်နေထိုင်စားသောက်မှု တာဝန်တွေကို တက်တက်ကြွကြွ လုပ်နိုင်ရမယ်။ ပြီးတော့ သိပ်မောပန်းတယ်၊ ပျာယာခတ်တယ်ဆိုတာမျိုး မရှိရဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြီးမြောက်သွားတာမျိုး ဖြစ်ရမယ်။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အမူအရာမျိုးနဲ့ ကျရောက်လာတဲ့ တာဝန်ကို ပျော်ပျော်ခံယူရမယ်။ ပြဿနာ ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကြီးသေးသေး အပြစ်ဖို့ခြင်း၊ အပြစ်ရှာခြင်း မရှိရဘူး။
အနားယူတတ်ရမယ်။ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်ရမယ်။
ရုတ်တရက် ရှောင်တခင် ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေကို ပြေလည်အောင် မြန်မြန်ထက်ထက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။ ပြင်ပက ပြောင်းလဲမှု အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆီလျော်မှု ရှိနေရမယ်။
သာမန် အအေးမိတာလို ကူးစက်ရောဂါ အပေါ့စားတွေကို ခုခံနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။
သင့်မြတ်လျော်ကန်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မျိုး ရှိရမယ်။ မပိန်လွန်း၊ မ၀လွန်း ဖြစ်ရမယ်။ မတ်တတ်ရပ်နေတဲ့အခါ ခေါင်း၊ ပခုံး၊ တင်ပါးတို့ဟာ ညီညွတ်မျှတနေရမယ်။ (ဗိုက်ပူဖင်ကော့မျိုး မဟုတ်)
မျက်လုံးတွေက တောက်ပနေရမယ်။ တုန့်ပြန်မှု လျင်မြန်ရမယ်။ မျက်စိမျက်နှာတွေ နီရဲမနေရဘူး။
သွားတွေ သန့်စင်နေရမယ်။ သွားတွေ ကျိုးမသွားရဘူး။ သွားဖုံးအရောင်တွေ ပုံမှန်အရောင်မျိုး ရှိနေရမယ်။ သွားဖုံး သွေးယိုတာမျိုး ရှိမနေရဘူး။
ဆံပင်တွေက တောက်ပနေရမယ်။ ဘောက်မရှိစေရဘူး။
ကြွက်သားတွေ ရှိသင့်တဲ့နေရာမှာ ရှိကိုရှိနေရမယ်။ အရေပြားတွေတင်းပြီး ရုန်းပြန်အား (elasticity) ရှိရမယ်။
ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ ယောက်ျားတို့ရဲ့ အဌာရသ ပညာရပ် (၁၈) မျိုး ရှိခဲ့တာကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ အခုခေတ်သစ်မှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ဖော်ပြဌာန်းထားတဲ့ ကျန်းမာရေးစံနှုန်း (၁၀) ချက်က ဘာမလိုက်နာစရာ ရှိပါ့မလဲ။ (ဘာသာပြန်သူ)
မောင်မောင်လှိုင် (အပ်စိုက်ကု) ၏ ကျန်းကျန်းမာမာ အသက် (၁၀၀) အမှတ် (၃) မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by Ko Nyan Posted Time 4:41 PM0Comment(s) Link This
ဈေးကွက်ဝင်ဗိုလ်ချုပ် သို့မဟုတ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဈေးပေါနေပြီ - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
ပြောချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီပို့စ်မှာ ရှည်ရှည်လျားလျား ပြောခွင့်ပေးပါ။ ကျွန်တော့်အတွေးနဲ့ကျွန်တော် ဖြစ်နေတဲ့ ဒေါသတွေကို ဘလော့ဂ်ဖတ်သူတွေဆီ ကူးစက်သွားခဲ့ရင်လည်း ကြိုတင်တောင်းပန်လိုက်ပါရဲ့ဗျာ။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အခုတလော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ ဆောင်းပါး၊ စာအုပ် စသည်ဖြင့် အမျိုးအမည် စုံလင်စွာနဲ့ ထွက်ရှိနေပါတယ်။ ကာလတစ်ခုမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခွင့် မရခဲ့တာမို့ အခုအချိန် အခါအခွင့်သင့်ချိန်မှာ အုံလိုက်ကျင်းလိုက် ရေးကြ၊ ထုတ်ကြတာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသက်ပေးပြီး ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ အကြောင်းကို မသိချင်တဲ့မြန်မာ ဘယ်မှာရှိလိမ့်မတုန်းဗျာ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကလည်း ဖတ်လို့မ၀၊ သိလို့မကုန် မဟုတ်လား။ လူအမျိုးမျိုးက အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ တင်ပြကြတာတွေကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး တမက်တမော ဖတ်ကြရတာလေ။ ဒါပေမယ့်... ဒါပေမယ့်ဗျာ.....။
သူငယ်ချင်းတွေကို ကျွန်တော်ပြောနေကျ စကားလုံးအတိုင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ "ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်လည်း အခုမှ တကယ့်ကို ဈေးကွက်ဝင် ရောင်းကုန်ကြီး ဖြစ်နေတော့တယ်ကွာ" ဆိုသလိုပါပဲ။ ဂျာနယ်တွေကလည်း ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံ ထည့်ကြတယ်။ (နိုင်ငံရေးဂျာနယ်၊ သတင်းဂျာနယ်က ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံထည့်တာမျိုးက နားလည်လို့ရတယ်။ မဆီမဆိုင် ပေါ့ပ်တို့၊ အတင်းအဖျင်းတို့၊ လမ်းဘေးမှာ လက်ကမ်းလိုက်ဝေတဲ့ စာစောင်တို့၊ သူ့ဟာသူ မဲဆွယ်တဲ့ကိစ္စတို့မှာ ဓာတ်ပုံကြီးသုံးနေတာကတော့ ဘယ်လိုမှကို လက်မခံနိုင်ပါ။ အင်္ကျီမှာ စတစ်ကာ ရိုက်ထားတာက ဗိုလ်ချုပ်ပုံ၊ လုပ်တဲ့အလုပ်က ဗိုလ်ချုပ်လမ်းစဉ်နဲ့ ပြဒါးတစ်လမ်း၊ သံတစ်လမ်း။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံကြီးထောင်ပြီး မဲဆွယ်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်စားတွေအကြောင်းကို သီးသန့်ရေးဦးမယ်။) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ ထည့်ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း စာအုပ်တွေကလည်း ထုတ်လိုက်ကြတာမှ ၀ယ်ဖတ်လို့ကို မနိုင်အောင်ပါပဲ။ ထားပါတော့ဗျာ... နှစ်လ သုံးလနေမှ တစ်အုပ်ထွက်ရင်အောင် ၀ယ်ဖတ်လို့ အဆင်ပြေချင် ပြေလိမ့်ဦးမယ်။ အခုတော့ စာအုပ်ဆိုင်မှာ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း စာအုပ်တွေက များလှချည်လားဗျာလို့ ညည်းရလောက်အောင်ကို ပေါချင်းသောချင်း။ အဲဒီလိုပြောတော့ တချို့ကို ကိုဉာဏ်ကို မျက်စောင်းထိုးကြမယ်၊ လက်သီးနဲ့ ထိုးချင်ကြလိမ့်မယ်။ မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ။ ဗိုလ်ချုပ်ကို အဲဒီလောက်ကြီး လုပ်စားကြတာကို ကျွန်တော် မကျေနပ်တာ အမှန်ပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကျေးဇူးတွေ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေအပေါ် ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တာ၊ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ တိုင်းပြည်အကျိုးကို အသက်စွန့်ပြီး လုပ်သွားခဲ့တဲ့ အာဇာနည်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာကို တွေးယူလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံတွေကို အသုံးပြုနေကြသူတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကို ရေးချင်တိုင်း ရေးနေသူတွေဟာ လွတ်လပ်ရေးဖခင်မို့ ဂုဏ်ပြုတဲ့စိတ်နဲ့ ရေးနေကြတာလား၊ ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားကြည်ညိုစိတ်နဲ့ ရေးဖွဲ့ကြတာလား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ မီဒီယာသမားတွေဟာ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ စာဖတ်တဲ့လူတွေကို နားလှည့်ပါးရိုက် လုပ်နေတာ အတော်အခံရခက်ပါတယ်။ မသိတဲ့လူက စိတ်မတိုပေမယ့် သိနေတဲ့အခါ စိတ်တိုရတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ ဖော်ပြခွင့်မရတဲ့ ကာလတွေတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံ၊ ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းဆိုရင် သိပ်ပြီးတော့ လူတွေက စိတ်ဝင်စားကြတာပဲ။ အခုများတော့ ပြော...မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဂျာနယ်တိုင်းနီးနီးမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံပါတယ်။ အဲဒီဂျာနယ်တွေကလည်း တွန့်လိမ်ကြေမွပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ခွေးခြေအောက်ကို ကျလို့ကျ၊ ထမင်းစားရင်သုံးတဲ့ စားပွဲခင်းဖြစ်လို့ဖြစ်၊ အိမ်သာတက်ရင်းသုံးတဲ့ ချီးကုန်းစက္ကူ ဖြစ်လို့ဖြစ်နဲ့ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့ဗျာ။ အခုနေများလေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲကို ၀င်သွား၊ ပြီးရင် ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ကိုင်ဖတ်၊ တစ်ဆက်တည်းပဲ ပါးစပ်ကနေ အကျယ်ကြီးအော်ကြည့်ပါလား၊ "ဟာ... ဒီမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံ ပါလာတယ်" လို့။ တစ်ချိန်တုန်းက ဆိုရင်တော့ အခြားလူတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက တစ်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာ တွေးကြည့်ပါတော့။ မတွေးတတ်ရင်လည်း လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ ကျွန်တော်ပြောသလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘယ်လောက် ဈေးပေါနေသလဲဆိုတာကို သိရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာကိုပဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်းကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောလို့ရပြီ၊ ဖတ်လို့ရပြီ၊ ရေးလို့ရပြီ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူနေကြဦးမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ကိုဉာဏ် လွန်တာရှိက ၀န္ဒာမိပါလို့ တောင်းပန်ရင်း အသာလေး ဘေးရှောင်နေပါရစေတော့။ အခုတော့ တလက်စတည်း ကြုံခဲ့သမျှ ကျွန်တော့်ဘ၀လေးကို ဆက်ပြောပါရစေဦး။
ဒီလိုဗျ ဒီလို။ တစ်ရက်ကပေါ့ဗျာ... ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် ထုံးစံအတိုင်း ဂျာနယ်ဝယ်ဖို့သကာလ ဂျာနယ်ဆိုင်ကို သွားခဲ့ရတာပေါ့။ ဂျာနယ်ရွေးရင်း၊ ၀ယ်ရင်းနဲ့ ခင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေဆီကို မျက်စိတစ်ချက် ကြည့်မိပါရော။ ဟော.. အဲဒီမှာ ဘာသွားတွေ့သလဲဆိုတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် နွယ်နီမဂ္ဂဇင်း ကိုပါ။ သြော်.. ကိုဉာဏ်ရယ် နွယ်နီမဂ္ဂဇင်းကို တွေ့တာများ အထူးအဆန်း ပြောနေရပြန်ပြီလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်အသည်း၊ ကျွန်တော့်အာရုံကို ဖမ်းစားလိုက်တာက မျက်နှာဖုံးပေါ်မှာ စာလုံးအနီနဲ့ ထင်းထင်းကြီးရေးထားတဲ့ စာလုံးတွေကြောင့်ပါခင်ဗျ။ ဘာလဲဆိုတော့ "ဗိုလ်ချုပ် တကယ်ရိုင်းသလော" တဲ့။ ကဲ... စာလုံးလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းပေဘူးလား။ အချို့သော စာဖတ်သူတွေအတွက် ဒဂုန်တာရာရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာကို မဖတ်ဘူးရင် အဲဒီစာလုံးတွေက ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ် မထင်ဘူးခင်ဗျ။ ဆရာဒဂုန်တာရာရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာထဲက "အောင်ဆန်း သို့မဟုတ် အရိုင်း" ကို ဖတ်ထားဖူးတဲ့ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် အတွက်ကတော့ တွေးရပြီပေါ့။ ခေါင်းစဉ်ကိုက စဉ်းစားစရာ တွေးစရာလေ။ အခြားလူတွေတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ကတော့ တစ်ခါမှ အဲဒီလို တွေးမှမတွေးဘူးတာကိုး။ ဟုတ်တယ်လေ... ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ တကယ့်အရိုင်းလား၊ ဒါမှမဟုတ် လူတွေက အရိုင်းအစိုင်းလို့ ထင်နေကြတာလား စသည်ဖြင့် တစ်ခါမှ မတွေးမိဘူးပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ လေးစားပြီးသား၊ ကြည်ညိုပြီးသား။ အဲလိုပဲ ခံစားမိခဲ့တာကိုး။ ဘာမှ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ အဲဒီမဂ္ဂဇင်းကို မြန်မာငွေ ၂၂၀၀ ကျပ် ပေးပြီး ပျော်ပျော်ကြီး ၀ယ်လာခဲ့မိပါတယ်။
အခန်းကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ အ၀တ်အစား မလဲနိုင်သေးဘူး။ မဂ္ဂဇင်းကို အရင်လှန်ဖတ်ရတယ်။ အဝေးကြီး မလှန်ရပါဘူးဗျာ။ မာတိကာပြီးတာနဲ့ စာမျက်နှာ ၁ ကနေ ၅ အထိ အဲဒီအကြောင်း ရေးထားတာပါပဲ။ ရေးတဲ့လူက ငြိမ်းသစ် တဲ့။ တစ်ခါမှကို မကြားဖူးတဲ့ ကလောင်နာမည် ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်က စာဖတ်နည်းတဲ့အတွက် ကလောင်စုံ မသိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် မဟုတ်ပါဘူးလေ... ဖြစ်နေတာ ဖြစ်မှာပါ။ ဟုတ်တယ်လေ... တော်ရုံကလောင်ဆိုရင် ဒါမျိုး အကြောင်းအရာကို ဘယ်ရေးရဲလိမ့်မလဲ။ လွယ်တာမှတ်လို့။ ဗိုလ်ချုပ်တကယ်ရိုင်းသလောဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ပြီး ရေးတယ်ဆိုတာ အချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ၊ တင်ပြပုံ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ရေးတတ်ခါမှ တော်ကာကျမှာ မဟုတ်လား။ ကိုဉာဏ်တို့ စာတွေဒီလောက်ဖတ်နေပြီး ဒီကလောင်ကို မသိတာကိုတော့ အတော်လေး အ တာပဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တွေးမိတယ်။ ထားပါလေ။ ဆက်ရအောင်ပါ။
ပထမဆုံးအပိုဒ်မှာ နိဒါန်းပျိုးတဲ့ သုံးလေးကြောင်းက ဟုတ်သလိုလိုတော့ ရှိသားဗျ။ အမယ်လေး... ပထမအပိုဒ်မှ မဆုံးသေးဘူး မောင်မင်းကြီးသားက လုပ်ချပါပြီဗျာ။ ဒဂုန်တာရာရဲ့ အောင်ဆန်း သို့မဟုတ် အရိုင်းကို သူ ကိုးတန်းနှစ်လောက်မှာ ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း စလာပါပြီ။ စိတ်ထဲမှာ ထင့်သွားတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် သူစာရေးဖို့အတွက် ခြေဆင်းပျိုးတာပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ တွေးဖြစ်အောင် တွေးလိုက်ပြီး ဆက်ဖတ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ငါးပါးမှောက်တာပါပဲ။ ကျေးဇူးရှင်က ဆရာဒဂုန်တာရာရဲ့ အောင်ဆန်း သို့မဟုတ် အရိုင်း အဖွဲ့အနွဲ့ထဲက သူသဘောကျတာလေးတွေ ပြောရရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကို ခပ်ရိုင်းရိုင်းလို့ ဆိုနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖော်ပြတာပေါ့လေ။ အင်း.. ဖော်ပြတယ်လို့ သုံးရတာ နည်းနည်းတော့ တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ငါးမျက်နှာရှိတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ သုံးမျက်နှာလောက်ကို အဲဒီအဖွဲ့အနွဲ့ထဲက ပြန်ကူးထားတာဆိုတော့ ကိုးကားတယ် ပြောရမလား၊ ညွှန်းဆိုတယ်လို့ သုံးရမလား။ ကျွန်တော့်ဉာဏ်လေး တစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ မပြောတတ်ပါဘူးဗျာ။ ထားပါတော့။
သည်းခံစိတ်ကို အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် မွေးပြီးသကာလ ဆောင်းပါးကိုဆုံးအောင် ကျွန်တော် ဆက်ဖတ်ပါတယ်။ နိဂုံးပိုဒ်လေးကိုတော့ နည်းနည်းလေး အမှတ်ပေးချင်သား။ ဘာတဲ့ ရေးထားတာလေးက "သို့ဖြစ်ရာ ဗိုလ်ချုပ်ကို ရှုမြင်နိုင်သော အရိုင်းသည် အတ္တနှင့်ယှဉ်သော အရိုင်းမဟုတ်။ စွန့်လွှတ်သောစိတ်၊ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့သော စိတ်၌တည်သည့် ရိုးဖြောင့်မှန်ကန်သော အရိုင်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်" တဲ့။ ကဲ မှတ်ပလား။
စာတွေဖတ်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်မှာ အကျင့်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီစာကို ကြိုက်ရင်ကြိုက်သလို၊ မကြိုက်ရင် မကြိုက်သလို မှတ်ချက်ရေးတတ်ခြင်းပါပဲ။ ဖတ်တဲ့စာအုပ်မှာ နေရာလွတ်မရှိရင် စာရွက်လွတ်နဲ့ရေးပြီး အဲဒီနေရာမှာ ပင်ချုပ်ပြီး ကပ်ထားတဲ့အထိ ရေးပါတယ်။ အခုလည်း အောက်မှာ နေရာလွတ်လေး ရှိတာဆိုတော့ အဲဒီဆောင်းပါးရဲ့အောက်မှာ မှတ်ချက်လေး ရေးမိပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ချင်ကြမယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ရေးပြပါရစေ။
"ဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော် ပြောသော သမိုင်းတစ်ကွက်နှင့် နိဂုံးတစ်ပိုဒ်မှလွဲ၍ ထူးထူးခြားခြား ဘာမှမပါဘဲ ဆရာတာရာ၏ ရုပ်ပုံလွှာကို ပြန်လည် ဘော်ချက်သော စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပေသည်။ ဆိုးဝါးပေစွ။ ပေးထားသော ခေါင်းစဉ်နှင့် ရေးထားသောစာမှာ ဘယ်လိုမှကို အဆက်အစပ် မရှိ။ အပေါ်က တိုက်ပုံဝတ်ထားပြီး အောက်က ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်ကြီးနှင့် ဖြစ်နေသကဲ့သို့ပင်။ ဗိုလ်ချုပ် တကယ်ရိုင်းသလား ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်မသိ။ သေချာသည်ကတော့ ဤဆောင်းပါးကို ရေးသူ ငြိမ်းသစ် ကတော့ တကယ်ရိုင်းပေသည်။"
ကျွန်တော့်မှတ်ချက် လွန်ကောင်းလွန်နိုင်ပါသည်။ ရိုင်းကောင်းရိုင်းနိုင်ပါသည်။ စာဖတ်တဲ့လူတွေကို ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုလုပ်ပြီး စော်ကားတာကတော့ အောက်တန်းကျလွန်းပါသည်။ အဲဒီဆရာ့ဆရာကြီး ငြိမ်းသစ်ဆိုသူများ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိလို့ စိတ်တိုတိုနဲ့ အဲဒီကောင် ကိုဉာဏ်ဆိုတဲ့ကောင် မလောက်လေး မလောက်စားနဲ့ တော်တော်ရိုင်းတဲ့ကောင်ဟု ဆိုလျှင်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်အရိုင်းအစိုင်းပါဟု ပြန်ပြောမိမည်လား မဆိုနိုင်။
မဆီမဆိုင်ဟုပဲ ဆိုချင်ဆို။ ဥပမာတစ်ခု ပေးချင်ပါသေးသည်။ ဈေးထောင့်တစ်နေရာတွင် "လာနော်... လာနော်... အင်္ကျီတွေ တစ်ထည်မှ တစ်ရာပဲ၊ တစ်ထည်မှ တစ်ရာပဲ" ဆိုပြီး အော်ရောင်းနေသည့် ဈေးသည်ကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ထင်သည်။ အင်္ကျီတစ်ထည်ကို တစ်ရာဆိုတော့ ဘာပဲပြောပြော အိမ်နေရင်းဖြစ်စေ၊ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရင်းဖြစ်စေ၊ လယ်ထွန်ရင်းဖြစ်စေ၊ ကုန်ထမ်းရင်းဖြစ်စေ၊ ဆိုက်ကားနင်းရင်းဖြစ်စေ၊ မြင်းလှည်းမောင်းရင်းဖြစ်စေ ၀တ်လို့ရတာပဲ၊ ၀င်ကြည့်ဦးမှ၊ ၀င်ရွေးဦးမှပဲ ဆိုပြီး ကြီးကြီးငယ်ငယ် ပုပုရွရွတို့ အလုအယက် လာကြမည်။ အင်္ကျီကို ရွေးနေကာကျမှ အစ်မကြီးယူပါ၊ အဲဒါက ငါးရာပါ၊ အစ်ကိုကြီးယူပါ အဲဒါက တစ်ထောင်ဖိုး သုံးထည်ပါဟု ပြောမည်။ မင်းအော်တော့ အင်္ကျီတစ်ထည် တစ်ရာဆိုဟု ဈေးဝယ်တွေက စိတ်တိုတိုနဲ့ မေးမည်။ ထိုအခါ ရောင်းသူက ဟာ... အစ်ကိုကြီးကလဲ၊ အစ်မကြီးကလဲ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အင်္ကျီတစ်ထည်ကို တစ်ရာနဲ့ ရမလားဗျ။ လက်ဖက်ရည်တောင် တစ်ခွက်ကို သုံးရာလောက် ဖြစ်နေတာကို။ တစ်ထည်တစ်ရာက ဟိုထောင့်က ကလေးဝတ်အင်္ကျီတွေကို ပြောတာဆိုပြီး မွေးကာစကလေး ၀တ်သည့် လက်တစ်ထွာခန့် အင်္ကျီလေးတွေကို ခပ်တည်တည်နှင့် လက်ညှိုးထိုးပြမည်။ ပြီးလျှင် အဲဒီဈေးသည်ဆိုတဲ့ကောင်ကပဲ ဈေးဝယ်သူကို ဘာလဲကွာ... အလကားနေရင်း ပေါချောင်ကောင်း လိုချင်တဲ့ကောင်နဲ့ လာတွေ့နေသေးတယ်ဆိုပြီး အထင်သေးမျက်လုံးနဲ့တောင် ကြည့်လိုက်ဦးမည်။ ကဲ... ဈေးဝယ်တဲ့လူရဲ့ နေရာကနေ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ အင်္ကျီတစ်ထည် တစ်ရာမက တန်တာကိုတော့ ဈေးဝယ်တဲ့လူတွေက သိတာပေါ့ခင်ဗျာ။ ထမင်းစားနေတဲ့လူတွေပဲ။ ဟိုဟာစားတာမှ မဟုတ်တာ။ ဒါပေမယ့် ဈေးရောင်းတဲ့လူက ဘာကိစ္စ အင်္ကျီတွေ တစ်ထည်မှ တစ်ရာ လို့ အော်ရသလဲ။ လာဝယ်တဲ့လူကို အပြစ်တင်သင့်ပါသလား။ ဈေးရောင်းသူ၏ လှည့်ကွက်သည်ဘာလဲ၊ ဈေးဝယ်သူ၏ အဖြစ်သည် ဘာလဲဆိုတာကို ယခုစာဖတ်သူ တွေးကြည့်နေမိမည်ဟု ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် ယုံကြည်နေမိပါသည်။ သင့်အတွေး၊ သင့်အမြင်များကိုလည်း ဖတ်လို၊ ကြားလိုပါကြောင်းခင်ဗျား။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
စာကြွင်း။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေ သူများတွေ ပြောပြောနေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ် ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် အခုချက်ချင်းတောင် ရလိုက်ချင်သေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့ အတွင်းခံတွေ၊ ဘော်လီတွေ၊ ခေါင်းစည်းတွေ၊ စွပ်ကျယ်တွေ၊ ဖင်ထိုင်ခုံစွပ်တွေ၊ ဘီယာပုလင်းတွေ၊ အရက်ပုလင်းတွေများ ထုတ်လာကြမလားလို့ တွေးမိလို့ပါ။ သြော်... စိတ်တိုသလားဗျ... ခင်ဗျားက သာမန်ပြည်သူတွေး တွေးတာကိုး။ ပြုံးနေတာလားဗျ... ခင်ဗျားက စီးပွားရေးအမြင် တယ်ရှိတာကိုး။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။
ရယ်ရယ်မောမော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသများ
အဆိုးမြင်သမားက စိတ်မချမ်းသာစွာ ပြောသည်။
"ဒီထက်ဆိုးတာ မရှိနိုင်တော့ဘူး၊ ဒီထက်ဆိုးတာ မရှိနိုင်တော့ဘူး"
အကောင်းမြင်သမားက အားတက်သရော ပြောသည်။
၀က်ဝံ၊ မြေခွေးနှင့် ယုန်တို့ အထွေထွေ စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရ စစ်မှုထမ်းချိန်ရောက်သဖြင့် စစ်သားစုဆောင်းရေးရုံးသို့ သွားကြသည်။ ဆေးကော်မရှင်က ၎င်းတို့တစ်ဦးချင်းကို ဆေးစစ်သည်။ ၀က်ဝံနှင့် မြေခွေးတို့ နှစ်ဦးစလုံး ဆေးအောင်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံး သုန်သုန်မှုန်မှုန် အမူအရာဖြင့် ထိုင်နေကြသည်။ မည်သူမျှ စစ်မှုမထမ်းလိုကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် ၀မ်းသာသောမျက်နှာဖြင့် အခန်းထဲမှ ယုန် ထွက်လာသည်။
"၀မ်းသာလိုက်တာ၊ ငါ စစ်မှုထမ်းစရာ မလိုဘူး၊ ငါ ဆေးမအောင်ဘူး"
"ဘာဖြစ်လို့ မအောင်ရမှာလဲ၊ မင်းရဲ့ကျန်းမာရေး ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကောင်းတယ်ဆိုတာ ငါတို့ သိသားပဲ"
"ဟိုအဝေးက တောင်ကုန်းကို မြင်သလား"
"ဘယ်ဘက်ထောင့်က ကျွန်းပင်ကြီးကိုရော မြင်ကြရဲ့လား"
"အောက်ဘက်ကို စိုက်ကျနေတဲ့ အရွက်နှစ်ရွက်ကိုရော"
"အဲဒါ ပြောတာပေါ့၊ ငါက ကျွန်းပင်ကြီးကိုတောင် မမြင်ဘူး"
မီးပြတိုက်သို့ လှေတစ်စင် ကပ်လာသည်။ လှေပေါ်မှ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ဒေါသထွက်နေသော အမူအရာဖြင့် စာပို့လုလင် ဆင်းလာသည်။ ထို့နောက် မီးပြတိုက် အမှုထမ်းအား ၎င်း၏စာကို ပေးလိုက်သည်။ မီးပြတိုက်ဝန်ထမ်းက ပြောသည်။
"နောက်တစ်ခါ ငါ့အတွက် စာလာပို့တဲ့အခါ အခုလို မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုး လုပ်လာတာတွေ့ရင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတစ်စောင်ကို ငါ တစ်နှစ်စာ မှာလိုက်မယ်၊ နားလည်လား"
ချူချာ လှေလှော်လာသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ လှေတစ်စီးကို တွေ့သည်။ လှေနှစ်စီး ဆုံကြသောအခါ ဒုတိယလှေပေါ်မှ ယောက်ျားကြီးနှစ်ဦးက ချူချာကို ပြောသည်။
"ဒီအနားမှာ အသံဆိုးနဲ့ အော်နေတဲ့လူကို မတွေ့မိဘူးလား"
"တွေ့ရင် ကျုပ်တို့ကို အကြောင်းကြားဗျာ"
မြစ်အတိုင်း ချူချာ ဆက်လှော်သည်။ တစ်နေရာတွင် "ကယ်ကြပါ၊ ကျုပ် ရေနစ်နေပြီ" ဟု လူတစ်ယောက် တစာစာ အော်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ချူချာက ၎င်းကို လှော်တက်ဖြင့် ခေါင်းကို ရိုက်သည်၊ ပါးစပ်မှလည်း လှမ်းအော်ပြောသည်။
"ဟေ့လူ၊ ပုန်းနေ၊ ဟိုမှာ ခင်ဗျားကို လိုက်ရှာနေကြတယ်"
"ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ ယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်ဘူး"
"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကာကွယ်နိုင်တဲ့လူတွေကို ဥပဒေက ကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား တကယ် မိန်းမယူတဲ့အခါ သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်"
လင်ရှိမယားကို ကြိုက်နေသာ လူငယ်သည် အမျိုးသမီး၏အိမ်သို့ မြင်းစီးကာ ရောက်လာသည်။ အိမ်ပေါ်မတက်မီ ၎င်းက မြင်းကို ပြောသည်။
"ငါးထပ်တိုက်က ၀ရန်တာရှိတဲ့အခန်းကို တွေ့တယ်မဟုတ်လား၊ ၀ရန်တာတည့်တည့်အောက်မှာ မင်းစောင့်နေ၊ သူ့ယောက်ျား ရောက်လာရင် အဲဒီ ၀ရန်တာကနေ ငါ ခုန်ဆင်းမယ်၊ ပြီးတော့ တို့ ဒုန်းစိုင်းပြီး လစ်ကြမယ်"
ဤသို့ပြောပြီး အမျိုးသမီး၏ အခန်းသို့ ၎င်းတက်သွားသည်။ ခဏကြာသောအခါ အခန်းတွင် လူခေါ်ခေါင်းလောင်းသံ မည်လာသည်။ လူငယ်သည် ၀ရန်တာဘက်ထွက်ကာ အောက်သို့ ခုန်ဆင်းလိုက်သည်။ အမျိုးသမီးက အခန်းတံခါးကို သွားဖွင့်သည်။ တံခါးရှေ့တွင် မြင်းရပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြင်းက ပြောသည်။
"အပြင်မှာ မိုးရွာလာတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဆင်ဝင်အောက်မှာ မိုးခိုရင်း စောင့်နေမယ်လို့ ကျွန်တော့်သခင်ကို ပြောလိုက်ပါ"
* * * * * မောင်ကောင်းထိုက်ရဲ့ ဟာသပဒေသာထဲက ကောက်နုတ်ဝေမျှတာပါ။ ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဗျာ * * * * *
Posted by Ko Nyan Posted Time 2:43 PM0Comment(s) Link This
သောမတ်ဖရီးမင်း၊ ရေနံ၊ အမေရိကန်နှင့် အာရပ်ကမ္ဘာ
ဒီပို့စ်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖတ်မိတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို သဘောကျလို့ ကောက်နုတ်ပြီး ပြန်လည်ဝေမျှတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် နည်းနည်းလေး လျှာရှည်ချင်သေးတဲ့အတွက် ခွင့်ပြုကြပါဦး။ သောမတ်ဖရီးမင်း ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အင်မတန်မှကို ကလောင်စွမ်းထက်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောတဲ့၊ ရေးတဲ့ အတွေးအမြင်တွေဟာ သူများတွေနဲ့မတူ ကွဲထွက်နေတတ်တာကို သတိထားမိပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ ပိဿလေးနဲ့ ဘေးပစ်ဆိုသလိုမျိုး ပြောတတ်တာကို သတိထားမိပါတယ်။ အချို့သော ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေတွေအတွက် မြင်သာထင်သာ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆရာကျော်ဝင်း ဘာသာပြန်ပြီး စာပေဆုရခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာပြားပြီ (The World is Flat) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ပြုစုခဲ့သူပေါ့။ နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာက သူတို့ဆီက ဂျာနယ်လစ်တွေကိုက အဲဒီလိုမျိုး အမြင်စူးရှကြတာလား ဆိုတာကိုပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီကဆရာတွေ ဘာသာပြန်တာတွေကိုသာ ဖတ်ကြရတာကိုး။ ဒါလည်း ကျွန်တော့်အတွေးပါ။ အခုလည်း သောမတ်ဖရီးမင်းရဲ့ If not now, when? ဆိုတဲ့ စာကိုရည်ညွှန်းပြီး ဆရာမင်းညို ရေးသားထားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ရေနံ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပါးတစ်ပုဒ်ထဲက သဘောကျမိတာ အချို့ကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အခုပြန်လည် ဝေမျှတာတွေပဲ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရင်ကို လာထိတဲ့ စာအချို့ကို ပြန်လည်လက်တို့ခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောလိုပါတယ်။
* "အမေရိကန်၊ မင်းက မီးတောင်ခြေရင်းမှာ အိမ်ဆောက်ထားတယ်။ အဲဒီမီးတောင်ရဲ့ အက်ကြောင်းတွေကနေ အခု ချော်ရည်တွေ ထွက်နေပြီ။ ပေါက်ထွက်တော့မလို တစ်တောင်လုံးလည်း ယိမ်းထိုးနေပြီ။ မင်းရဲ့အိမ်ကို ရွှေ့တော့" အခုကိစ္စမှာ မင်းရဲ့အိမ်ကို ရွှေ့တော့ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန်တွေ (အာရပ်ကမ္ဘာက) ရေနံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငမ်းငမ်းတက် ဖြစ်နေတာကို ရပ်လိုက်တော့လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
* ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ မှာ အမေရိကန် (ဥရောပနဲ့ အာရှလည်း ပါပါတယ်) ဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကို ဓာတ်ဆီဆိုင်ကြီးတွေ စုဝေးရာဒေသအဖြစ် သဘောထားခဲ့ကြတယ်။ ဆော်ဒီဆီဆိုင်၊ အီရန်ဆီဆိုင်၊ ကူဝိတ်ဆီဆိုင်၊ ဘာရိန်းဆီဆိုင်၊ အီဂျစ်ဆီဆိုင်၊ လစ်ဗျားဆီဆိုင်၊ အီရတ်ဆီဆိုင်၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဆီဆိုင် စသည်ဖြင့်။
* ကဲ... ကျွန်တော်တို့ သဘောတူညီမှု လုပ်ကြရအောင်။ ခင်ဗျားတို့ ရေနံတွေကို ထုတ်သာထုတ်။ ဈေးလည်းမများစေနဲ့ပေါ့။ အစ္စရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း သိပ်ခေါင်းထဲ ထည့်မနေပါနဲ့။ အဲဒီလို လုပ်ပေးတဲ့အတွက် ခင်ဗျားတို့ အာရပ်တွေလည်း လုပ်ချင်တာမှန်သမျှ လုပ်နိုင်တယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ ပြည်သူတွေကို တားချင်တာရှိလည်း တား။ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားချင်လည်း စား။ ခင်ဗျားတို့ ဗလီတွေကနေ အမေရိကန် မကောင်းကြောင်း တရားဟောချင်သပဆိုလည်း ဟော။ ခင်ဗျားတို့ သတင်းစာတွေထဲ ကျုပ်တို့ အမေရိကန်တွေအကြောင်း ကြိုက်တာရေး။ ရေနံလေးသာ ထုတ်ပေးပါ။ ဈေးလေးလည်း ချပေးထားပါ။ အစ္စရေးကိုလည်း သိပ်ပြဿနာ မရှာနဲ့ပေါ့။ ကျန်တာ ကြိုက်တာသာ လုပ်ဗျာ။
* အာရပ်ကမ္ဘာမှာ ခိုင်မာတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့တွေမရှိ၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေ မရှိ၊ ဒီမိုကရေစီ အစဉ်အလာ ဒါမှမဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာလည်း မရှိ။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းရေးဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။
* အာရပ်ကမ္ဘာတွင် အဓိကမလုံလောက်မှု (၃)ခု ရှိသည်။ (၁) ပညာရေး ခါးဆက်ပြတ်မှု၊ (၂) လွတ်လပ်မှု၊ (၃) အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်လှုပ်ရှားပိုင်ခွင့် မရှိခြင်း။
* အာရပ်ကမ္ဘာကြီး သမိုင်းထဲကို ပြန်လာတာဟာ အင်မတန်ကို ခက်ခဲပြီးတော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စဆိုပြီး အယူမမှားသင့်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကနေ့အာရပ်ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ကြား မနေဘဲ အဲဒီမှာ ဒီမိုကရေစီ အမြစ်တွယ်အောင် လုပ်ပေးကြပါစို့လားဗျာ....။
ဖတ်မိတာကတော့ Real Time Journal, Vol.1, No.5, Page.7 မှာ ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။ သောမတ်ဖရီးမင်းရဲ့ ဆောင်းပါးကို သိုးဆောင်းဘာသာနဲ့ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ရှိကြောင်းပါခင်ဗျား။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။
ညနေ ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင်ပြီး၏။